Wasiirka Duulista Somaliland Oo Ka Hadlay Hawlgal Olole Nadaafadeed Oo Laga Fuliyay Madaarka Hargeysa | Araweelo News Network (Archive) -
Wasiirka Duulista Somaliland Oo Ka Hadlay Hawlgal Olole Nadaafadeed Oo Laga Fuliyay Madaarka Hargeysa
Hargeysa(ANN)Wasiirka Duulista Hawada Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi Ayaa sheegay inay wax weyn ka bedelayaan hawlaha madaarka Cigaal International ee magaalada Hargeysa iyo madaarada kale ee dalka, isagoo xusay in shaqaalaha Madaarada
la siin doono direys u gaara oo lagu garto qofka shaqaalaha ka ah madaarka.
Sidoo kale wuxuu ka hadlay adkaynta dhinaca amaanka iyo hubinta dadka kasoo degaya iyo kuwa ka dhoofaya madaarka caalamiga ah ee Hargeysa iyo madaarada kaleba.
Wasiirku wuxuu sidaa ku sheegay hadal uu maanta u jeediyay shaqaalaha madaarka Hargeysa oo sameeyay hawlgal olole nadaafadeed oo dib loogu hagaajinayo nadaafada madaarka caalamiga ah ee Cigaal International Airport.
Sidoo kale Wasiirku oo ka hadlay hawlaha lagu nadiifinayay Madaarka ayaa sheegay inay ku dedaali doonaan sidii bilicda madaarka magaalada Hargeysa sare ugu qaadi lahaayeen.
Maxamuud Xaashi wuxuu sheegay in horumarka iyo bilicda uu ku talaabsado qaran laga dheehan karo madaarka, sidaa darteed waxa uu ku dooday in muddo kooban ka dib ay sida ugu dhakhsaha badan sare ugu qaadi doonaan dhamaanba baahiyaha aasaasiga ah ee uu u baahan yahay madaarku.
Waxa kale oo uu wasiirka duulista hawada Somaliland tilmaamay in dhamaanba shaqaalaha madaarka Hargeysa la siin doono dirays isku mid ah, si looga badbaado is dhex yaaca shaqaalaha iyo kuwo aan shaqaalaha ahayn. Sidoo kale waxa uu sheegay in wax weyn laga bedeli doono hawlaha amaanka, isagoo yidhi, “Amaanka iyo bilacda madaarku waa lama huraan, waa inay dadka dhoofaya iyo kuwa soo degayaa ogaadaan in dhamaanteen amaanka iyo ilaalinta nabadgelyadu dan inoo tahay. Sidaa awgeed waa inaanay dadku dhib u arkin xiliga baadhista iyo hubinta oo ay muujiyaan dulqaad.”